Injeniera - Geofumada
Tanànan'ny taonjato faha-101: fananganana fotodrafitrasa XNUMX
Ilaina ankehitriny ny fotodrafitrasa. Matetika isika dia mieritreritra tanàna marani-tsaina na nomerika amin'ny sehatry ny tanàna lehibe misy mponina marobe ary hetsika maro mifandraika amin'ny tanàna lehibe. Na izany aza, mila fotodrafitrasa ihany koa ny toerana kely. Zava-misy satria tsy ny sisintany politika rehetra no mifarana amin'ny tsipika eo an-toerana, ...
Ny tsara indrindra amin'ny BIM Summit 2019
Geofumadas dia nandray anjara tamin'ny hetsika iraisam-pirenena iray manan-danja indrindra mifandraika amin'ny BIM (Building Information Maganement), dia ny Vovonana BIM Eoropeana 2019, natao tao amin'ny Auditorium AXA ao an-tanànan'i Barcelona-Spain. Ity hetsika ity dia nialohavan'i BIM Experience, izay ahafahana manana fahitana ny zavatra hitranga amin'ny andro ...
Fandrosoana sy fampiharana ny raharaha BIM - Amerika afovoany
Ny nankanesana tany amin'ny BIMSummit tany Barcelona tamin'ny herinandro lasa teo dia nahafinaritra. Jereo ny fomba fijerin'ny fomba fijery samy hafa, manomboka amin'ny olona tsy mino an'izay tena mahita fahitana, fa ao anatin'ny fotoana manokana amin'ny revolisiona amin'ireo indostria isika izay manomboka amin'ny fakana vaovao eny an-tsaha ka hatramin'ny fampidirana ireo asa ara-potoana ...
Ny AEC Next sy ny SPAR 3D 2019 Programme conference dia nambara
Ireo mpandahateny fihaonambe 100 dia nambara, anisan'izany ny fampisehoana vaovao avy amin'ny National Geographic sy IBM. 28 martsa 2019 (Anaheim, Kalifornia, Etazonia) - Ireo mpikarakara ny AEC Next Technology Expo + Conference ary SPAR 3D Expo & Conference, ny hetsika fiaraha-miombon'antoka voalohany mifantoka amin'ny haitao ho an'ny…
pejy 1 pejy 2 pejy 3 ... pejy 5 Next pejy